HomeAfaan OromooVideosXilahuun Yaamii Maal Jedhe? Kello Media Documentary (Afaan Oromo)
Video kana otoo hinargiinis ummanni oromo akka Abiy Hacee ajjeesise hinbeeka ture. Haata’u malee namni beekaas haata’uu wallaalummaan “shaneetu ajjeese” jedhus jira ture.
Kana booda garuu Hacee enyutu maaliif ajjeese jennne walgaafachuutti yaroo gubuu otoo hintaane namni dandeettii isaa qabu GUMAA Hacee baasuutu oromoof faydaa qaba. Warri Kello Media seenaa dalagdaniif hedduu galatooma!